Adeegga Afgarad | Golis Telecom Somalia
Qaabka loo isticmaalo ADEEGGA AFGARAD
Adeegga qaamuus waa adeeg ku saleysan isticmaalka SMS. Qofka wuxuu awoodi karaa in uu farriin SMS u soo diro ADEEGGA QAAMUUS isagoo weydiinaya macnaha erey English ama Soomaali ah.
Qofku marka uu doonayo in uu erey soo weydiiyo ADEEGGA Qaamuus waxa uu farriin u dirayaa access nambarka ama short code-ka ah 188. Nambarkani ma aha mid macmiilka lacag ka goosanaya ee waa mid bilaash ah marka uu qofku ereyada soo weydiinayo.
Qaabka uu macmiilku isku diiwaangelinayo
Macmiilka uma baahna in uu is diiwaangelin gaar ah sameeyo. Nambarka 188 ayaa wuxuu u shaqeeyaa dhowr ujeeddo oo kala duwan ku waasoo kala ah:
1. Mar waxaa loo isticmaalayaa is diiwaangelin ahaan
2. Marna waxaa loo isticmaalayaa cusbeysiinta isticmaalka ADEEGGA
3. Marka kalena waxaa loo isticmaalayaa isticmaalka ADEEGGA.
Xaaladda 1aad ee ah in loo isticmaalo is diiwaangelin waxay u shaqeyneysaa sidan:
– macmiilka haddii uu doonayo in uu isticmaalo ADEEGGA Qaamuus waxa uu toos farriin ugu diri karaa nambarka 188 isagoo ujeedadiisu tahay in uu erey weydiiyo. Tusaale, macmiilka aan hore ADEEGGAN u isticmaalin marka uu is yiraahdo isticmaal ee uu erey soo weydiiyo isagoo farriinta u diraya 188 ayaa waxaa dhaceysa in Systemku uu eego in macmiilkan hore u diiwaangashnaa iyo in kale.
– Haddii markaa macmiilku aanu hore u diiwaangashnayn Systemka ayaa wuxuu diiwaangelinayaa macmiilkii oo uu ka goosanayaa lacagtii diiwaangelinta kadibna markuu hubsado in qofkii la diiwaangeliyey ayuu adeegii islamarkiiba u fasaxayaa.
– Macmiilka waxaa u soo dhacaya labo fariimood marka ay xaalandan tahay, farriinta 1aad oo ah in loo sheegayo in la diiwaangeliyey iyo farriin labaad oo ah macnihii ereygii uu soo dalbaday.
– Haddii macmiilka aaney lacag ugu jirin telefoonka waxaa dhaceysa in aan la diiwaangelinin islamarkaana laga codsado in uu lacag ku soo shubto.
Xaaladda 2aad ee ah cusbeysiinta ADEEGGA, xaaladdaani ayaa u shaqeyneysa sidan:
– Haddii uu macmiilku ADEEGGA ka xirmo oo ay bishii ka dhamaato kadibna uu adeeggii soo codsado isagoo uu ka xiran yahay waxaa dhaceysa in uu Systemku u cusbeyneysiiyo ADEEGGA lacagtiina uu ka goosto islamarkaana adeeggii uu soo weydiistay loo fuliyo.
– Haddii aaney lacag ugu jirin telefoonka waxaa dhaceysa in uu adeeggii ka sii xirnaado lagana codsado in uu lacag ku shubto.
Xaaladda 3aad, xaaladdani waa xaaladda caadiga ah ee macmiilkiina adeeggii u furan yahay oo aan weli ka dhicin, waxa uu markaa soo weydiiyo ee uu u diro 188 si caadi ah ayaa loogu soo jawaabayaa wax lacag ahna lagama goosan doono.
Adeegga Qaamuus waxaa loo isticmaalaa labo qaab oo kala ah
in erey soomaali ah lagu macneeyo English
iyo in erey English ah lagu macneeyo Somali
Qaabka loo isticmaalo Somali – English
Qaybtani waxaa loogu talagalay qofka in uu Adeegga Qaamuus soo weydiiyo erey Somali ah kadibna uu jawaabtii ku helo macnihii oo English ah.
Si uu qofku u isticmaalo waa inuu raacaa habkan:
Soo qor SOM kadibna raaci ereyga aad weydiineyso ee soomaaliga ah kadibna u dir 188,
Som wiil => 188